Nahoana No Nanasonia Hanakatona Tranonkala Malaza Iray Ireo Koreana Maherin’ny 200.000 ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Avrily 2018 5:34 GMT
Pikantsary avy amin'ny tranonkala Ilbe. Ny lohatenin'ny lahatsoratra dia hoe, “Ahoana no ahafantarana raha fitaovam-panambadiana ny vehivavy”. Milaza izany fa raha misy midaroka ny sipany ary mbola miverina aminy rasipa, izy no vehivavy mendrika hovadiana.
Ho setrin'ny antso hanakatonana ny IIbe, nanazava ny biraon'ny prezidansa rehefa nandinika fa manana fahefana hanakatona tranonkala amin'ny alalan'ny Korea Herald ny Vaomiera Misahana ny Lasitra Fifandraisana ao Korea:
Tsy vao sambany ny vahoaka Koreana no nanasonia fanangonan-tsonia mangataka ny fanakatonana ny Ilbe. Efa nisy ny fanangonan-tsonia voalohany natao tamin'ny Oktobra 2017 raha nampiditra sarina tovovavy ireo lehilahy mpisera, milaza ny sary nampidirina ho sarin'ny “anabaviny” izy ireo nandritra ny fety Cheosuk. Nahasarika fanehoan-kevitra tsy tambo isaina ny sary fa azo sokajiana ho toy ny fanorisorenana izany. Nahangona sonia 43.000 ny fanangonan-tsonia tamin'ny volana Oktobra.
Matetika ireo mpikambana ao amin'ny IIbe miantso ny vehivavy Koreana ho “alikavavy kimchi” ary ny vahoaka Shinoa ho “kadradraka”. Manohana mazava ny hetsika herisetra ny lahateny sasany ataon'ireo mpikambana ao amin'ny IIbe. Tamin'ny Jiona 2017, nanoratra tao amin'ny dinika ny mpikambana iray ao amin'ny IIbe fa nitoraka asidra tamina zazavavin'ny tarika mpihira Kpop, Twice tao amin'ny seranam-piaramanidina izy.
Tamin'ny volana Janoary 2018, namazivazy ny filoha teo aloha Roh Moo Hyun ireo mpiseraseran'ny IIbe tamin'ny tabilaon-dokambarotra mivaona, manova ny filoha teo aloha ho sarim-biby Koala ao amin'ny Times Square NYC. Nopetahana anaram-bositra hoe Roh-ala i Roh ary ny sarina orsa no sary matetika ampiasaina ao amin'ny Ilbe hanovàna endrik'olona [jereo ny sary etsy amin'ny farany ambony].
Tamin'ny 7 Martsa 2017, nahitana sora-baventy mivatambatana nahanton'ireo mpikambana ao amin'ny IIbe tao ivelan'ny Antenimieram-pirenena ao Korea Atsimo. Nahitàna sary efatra ilay sora-baventy ary nampiseho ilay mpanao lalàna avy ao amin'ny antokon'ny mpanohitra Minjoo, Pyo Chang-won sy ny sarin'ny tavan'ny vadiny natao photoshop ho sarim-batana miboridana isan-karazany, ao anatin'izany ireo biby mpiteraka. Ho setrin'ny fanohanan'i Pyo ny fampiratiana hosodoko manesoeso antsoina hoe “Dirty Sleep (Torimaso Maloto)” tao amin'ny Antenimieram-pirenena ilay sora-baventy. Mampiseho ny sarin'ny filoha teo aloha Park Geun-hye miboridana ny hosodoko rehefa avy naongan'ny antenimieram-pirenena izy ary voampangan'ny fitsarana araka ny lalampanorenana ho nanao kolikoly.
Tamin'ny volana Oktobra 2014, mpikambana an-jatony tao amin'ny Ilbe no nanatontosa fetibe pizza teo akaikin'ny vondrona mpanao fihetsiketsehana nitokona tsy hihinan-kanina hanoherana ny tsy fandraisana andraikitry ny governemanta taorian'ny loza voajanahary nahazo ny sambo Sewol. Loza izay nitranga tamin'ny 16 Aprily 2014, ary namoizana ain'olona 325 — izay mpianatra ambaratonga faharoa ny ankamaroany.
Manasongadina ireo mpitsikera ara-kolontsaina fa fanehoana ny aretin'ny fiarahamonina misaraka eo amin'ny ankavanana sy ny ankavia, ny manankarena sy ny mahantra, ny antitra sy ny tanora, ny vehivavy sy ny lehilahy ary ny manan-javatra sy ny tsy manan-javatra ny lazan'ny IIbe. Mety hanakana ny fiparitahan'ny angovo ratsy ao anatin'ny fotoana fohy ny fanakatonana ny tranonkala, saingy tsy afaka manasitrana ny psikôlôjia iombonana miori-paka eo amin'ny rafitra ara-politika sy ara-toekarena mizarazara.